के तपाइले डबस्म्यासमा भिडीयो अपलोड गर्नुभएको छ ? सचेत रहनुहोस् ! भिडियोबाट पोर्न फिल्म बन्न सक्छ | Jukson
(एजेन्सी) पछिल्लो सयम डबस्म्यास नामक एउटा भिडियो मेसेजिक एप्लिेकसन निकै चर्चामा रहेको छ । अझ यसलाई सेलिब्रिटीहरुले प्रयोग गर्न थालेपछि यसको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो । यो साधारण एप्लिकेसनमा तपाईंलाई एप्लिकेसनमा रहेको रिपोसिटोरीबाट कुनै अडियो छान्न दिन्छ र त्यही अडियोको आधारमा भिडियो रेकर्ड गर्न दिन्छ । उक्त भिडियोलाई समाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न सकिन्छ । अहिले फेसबुक र युट्युवमा हजारौ एकाउन्टहरु डबस्म्यास भिडियोसँग जोडिएका छन् । त्यस्तै अनगिन्ती युट्यूव डबस्म्यास भिडियोहरु भेटिन्छन् । आधाभन्दा धेरैमा महिलाहरु छन् ।
डबस्म्यासका भिडियोहरुलाई पोर्न बनाएर शेयर हुनसक्ने खतरा समेत उत्तिकै छ । व्हाट्सएपमा भाइरल बनेको एउटा भिडियोमा एउटी अन्दाजी २० वर्षीय युवतीले अश्लिल बोलेको सुनिन्छ । यस्तो भिडियो झट्ट हेर्दा वास्तविक जस्तो देखिन्छ । तर होइन, उक्त भिडियोलाई रि डब गरेर अश्लिल बनाइएको हो ।
डबस्म्यासका भिडियोहरु पनि अन्य भिडियोजस्तै सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । डाउनलोड भइसकेका भिडियोहरुमा तपाईको अडियो मिसिन्छ र मानिसलाई तपाईले बोलेजस्तो लाग्छ । तमिल डबस्म्यास फेसबुक पेजमा अहिलेसम्म ३२ हजार लाईक आइसकेको छ । त्यस्तै युट्युवमा २ हजारभन्दा बढी भिडियो अपलोड छ । आधाभन्दा धेरैमा महिलाहरुले तमिल फिल्मको डायलग बोलेको अडियो छ ।
पछिल्लो एक रिर्पोटका अनुसार एक चर्चित तमिल एफएम रेडियोले मानिसहरुलाई यस्तो भिडियो प्रयोग नगर्न सचेत तुल्याएको छ । धेरै महिलाहरु यस्तो भिडियोका कारण ब्ल्याकमेलको शिकार भएका छन् । कतिले उनीहरुलाई भिडियो देखाएर यौन सम्बन्धको प्रस्ताव समेत राखेका छन् । डबस्म्यास प्रयोग गर्ने कलेजका छात्राहरु अधिकांशत यस्तो प्रकरणको निशाना बनेको एफएम रेडियोले जनाएको छ ।
एकवर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने योजनासहित यस्तो छ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम
आपनै बुवाबाट बलात्कृत छोरीको बयान